दमौली, ७ चैत । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एक पक्की पुलको शिलान्यास गर्दै विकासका काममा पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन् । तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–४ स्थित डाक्रेखोलामा रु साढे दुई करोडको लागतमा निर्माण हुनलागेको मोटरेबल पुल बुधबार शिलान्यास गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले सो आरोप लगाएका हुन् । उनले काङ्ग्रेसले शुरु गरेको योजनामा बजेट कटौती […]
चितवन, चैत । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर महानगरलाइ शिक्षाकाे क्षेत्रमा पनि पहिलाे बनाउने बताएकी छिन् । आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षा रहेको बताएकी छन् । स्कुल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुर र भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा वडा नं ९ मा सञ्चालन हुन लागेको सीपमूलक मन्टेश्वरी तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास […]
काठमाडौं, ४ चैत- विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र अर्का वरिष्ठ नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई सुरक्षा निकायले आफुहरुको पहुच भित्र नै रहेको दावी गरेको छ । हाल सिन्धुलीमा रहनुभएका बिप्लवको गतिबिधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटिरहेको जानकारी आफुहरुलाई प्राप्त भएको सुरक्षा उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । केहीदिन देखि सिन्धुलीका कहिले बस्ती र […]
काठमाडौं, ३ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीमती सीता दाहालको स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिका जाने भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, स्वकीय सचिव तथा छोरी गंगा दाहालसहितको टोली आज साँझ ५ बजे इतिहाद एयरवेज मार्फत अमेरिका प्रस्थान गर्नुहुने सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकाको जोन हकिङ्स् अस्पतालमा श्रीमती सीता दाहालको […]
रुपन्देही, ३ चैत – नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले वार्ताको ढोका बन्द गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई भूमिगत बनाउने काम गरेको अाराेप लगाएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता खाँडले भने, सरकारले संवाद र छलफलको ढोका बन्द गरेर जवरजस्त भूमिगत बनाउने काम गरेको छ । […]
काठमाडौं, २६ फागुन । सरकारले स्वतन्त्र मधेसकाे एजेन्डा छाडेका भनिएका पृथकतावादी सिके राउतकाे सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिएकाे छ भने एकीकृत जनक्रान्तिकाे उद्घाेष गरेका विप्लव नेकपामाथि थप कडाइ गरेकाे छ । राउतकाे सुरक्षामा सईलाई खटाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव नेकपालाई राजनीतिक व्यवहार गर्नु नपर्ने बताएका छन् । सरकारसँग सम्झौता हुनुअघि मुलुक विखण्डनको माग […]
काठमाडौं, ६ फागुन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले आगामी ९ गते कार्यदलसहितको बैठक आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले साँगठानिक एकता टुंगो लगाउन कार्यदलकोसदस्यसहित सचिवालयको बैठक बोलाएको जानकारी प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको बैठकमा कार्यदल संयोजक तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पेश गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो […]
गुल्मी, ६ फागुन नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार रोक्न महायज्ञ लगाएर, धर्मको डर देखाएर सम्भव नहुने बताएका छन् । ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद यात्रा–२०७५’ को नारा बोकेर मेची महाकाली यात्रामा निस्किएका डा. भट्टराइले गुल्मीको मुसकिोटमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा संवादमा यस्तो धारणा राखेका हुन् । पुर्व माओवादी […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,देश,मुख्य समाचार,राजनीति Read More »
तनहुँ , ५ फागुन प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा काङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउँदै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा काङ्ग्रेसले सदनबाट आवाज उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तनहुँको दमौली पुगेका नेता पौडेलले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै उनले सो धारणा राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबारे पत्रकारको जिज्ञासामा नेता पौडेलले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन […]
बागलुङ, ५ फागुन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दौड सकेर आर्थिक दौडमा लागेको बताएका छन् । दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि देशमा नयाँ दौड सुरु भएको उनको भनाई छ। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअभियान अन्तर्गत ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद यात्रा–२०७५’ को नारा बोकेर बागलुङ आइपुगेका डा. भट्टराईले राजनीतिक रिले […]